विवश वस्ती सोमवार, श्रावण २, २०७४
‘भाग्य’को घैंटो नै फुटेपछि कसको के लाग्दोरहेछ र ? यसपालि यस्तै भो । मेरा छिमेकी नैयालाल काकाको ‘भाग्य’ फुट्यो । काकाको फुटेको ‘भाग्य’लाई सुपरग्लु वा अरू त्यस्तै चिजले फेरि जोडौं कि भन्ने नलागेको होइन । तर, जाँगर चलेन । एउटा चुनाउ हारेर के हुन्छ ? अरू पनि चुनाउ आइहाल्छ नि । मैले यस्तै सोचेँ ।‘काका, चिन्ता नगर्नुस् । एउटा माघले जाडो जाँदैन । यस्ता जाबो चुनाव त कति आउँछन्, आउँछन् । अब अरू चुनावमा मिहिनेत गरेर जित्नुपर्छ ।’ चुनाव हारेको ह्याङओभरबाट अझै उत्रिई नसकेका काकालाई सान्त्वनाका जेरी–स्वारीहरू बाँड्न उपयुक्त ठानेँ, मैले ।
‘तिम्रो कुरा ठीकै हो । अहिले नजिते पनि अरू चुनावहरूमा जितूँला । तर, मलाई अन्तर्घातले हरायो । मैले जिन्दगीमा यस्तो अन्तर्घात अरू बेला कहिले पनि भोगेको थिइनँ । तर, यसपटकको चुनावमा भने मलाई अन्तर्घातले खत्तम पार्‍यो ।’ काकाले उदास हुँदै भने । ‘हैन, तपाईंमाथि कसरी अन्तर्घात भयो, काका ?’ म भने चकितै परेँ । उनी अन्तर्घातका कारण हारेका हुन् भन्ने मलाई पटक्कै विश्वास भएन । चुनावअघि अरू कसैले पनि उठ्ने कुरै गरेका थिएनन्, कसैले पनि टिकटका लागि दौडधुप गरेकै थिएनन्, सबैले काकालाई नै एकलौटि उठाएका थिए, सबैले अघाउञ्जेल सघाएकै थिए । हैन, कसले पो उनलाई अन्तर्घात गरेछ ? म चकितै परेँ । सोधेँ, ‘तपार्इं अन्तर्घातको कारण हार्नुभएको होइन, काका ।
जनताले जित्नका लागि चाहिएजति मत नदिएका कारण हार्नुभएको हो ।’काकाले जिद्दी गर्दै भने, ‘हैन, म हार्नुमा अन्तर्घात नै मुख्य कारण हो । अरू कुनै कारण नै छैन । मलाई सबै थाहा छ । के म त्यति अबुझ हुँ र ? अन्तर्घात नभएको भए मैले चुनाव जितेको हुँ । त्यही अन्तर्घातले हरायो, मलाई ।’ काकाको जिद्दी मलाई पटक्कै मन परेन । मैले भनेँ, ‘हैन, कसले पो अन्तर्घात गर्‍यो तपार्इंलाई ? तपाईंले टिकट पाउने भएपछि एक जनाले पनि तपार्इंलाई हुँदैन भनेका होइनन् । तपार्इंले टिकट पाएपछि सबै चुनावमा दिलोज्यानले खटेकै हुन् ।
न कसैले विरोध गरे, न कसैले सघाउन नै गाह्रो माने । कसलाई अन्तर्घाती देख्नुभयो, तपार्इंले ?’ ‘व्यक्ति–व्यक्तितिर नलागौं, भतिज । तर, म अन्तर्घातकै कारण हारेको हुँ । चुनाव हुनु अघिल्लो दिन मैले एउटा सपना देखेको थिएँ । त्यो सपनामा पनि मैले अन्तर्घातकै कारण हारेको देखेको थिएँ । सपनामा जे देखेँ, विपनामा त्यो पूरा भएरै छाड्यो ।’ काकाले कुनै धक नमानी बताए । ‘काका, तपाईंलाई पनि एउटा रोगले नराम्ररी समातेछ । जित्दा केही नभन्ने र हार्दा अन्तर्घातलाई दोष दिने ? अरु उम्मेदवारहरूजस्तै स्वभाव देखाउनु भो, तपार्इंले । म त तपार्इं अन्तर्घातले गर्दा हार्नुभएको हो भन्ने पटक्कै लाग्दैन । यस्तो कुरा नगर्नुस् ।’ मैले अलि कडा हुँदै भनेँ ।
‘हैन, भतिज । तिमी पनि कस्तो अबुझ्झ्की बन्या । पल्लो टोलका रामलालले चुनाव हा¥यो, उसले आफ्नो हारको कारण अन्तर्घात नै भन्दै हिँडेका छन् । सल्यानटारको नेप्टे माइलाले चुनाव हार्‍यो, उसले पनि त्यसैलाई दोष दियो । कटहरबोटे काइँलाले त जम्मा २ मतले हार्‍यो, झन्नै फेन्ट भ’का बिचरा ! उनले पनि अन्तर्घातलाई नै दोषी ठहर्‍याएका छन् । अनि, मैले पनि त्यही अन्तर्घातलाई नै आफ्नो हारको कारण ठान्दा के बिग्रियो र ?’
काकाले आफ्नो तर्कमा पाइन लगाउँदै भने । नैयालाल काकाको तर्कसामु म गलेँ । र, बिदावारी हुने बेला मैले सान्त्वना दिँदै भने, ‘काका, अब त्यो अन्तर्घातलाई नै कारबाही गर्नुपर्छ । त्यल्लाई कारबाही गरे तपाईको चित्त कसो नबुझ्ला, हैन र ?’ बुझेर हो वा नबुझेर काकाले टाउको हल्लाए ।